Mario Balotelli oo ku dhaqaaqay dhaqan aan horey looga baran oo uu indhaha dadka….. – SBC
Mario Balotelli oo ku dhaqaaqay dhaqan aan horey looga baran oo uu indhaha dadka…..
Weeraryahanka u dhashay dalka Talyaaniga kana tirsan kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska ayaa la soo baxay dhaqan aan horey looga baran isla markaana ku cusub saxaafada & indhaha bulshada caalamka isagoo doonaya in uu dib u soo ceshado sumcada iyo magaciisa ficilada iyo dhaqamadiisa xun ku baaba’ay.
Talaabo dhanka wanaaga ah oo u qaaday Balotteli ayaa ah in uu maalgalin lacageed oo xoogan uu ku sameeyey dugsi waxbarasho oo ku yaal Koonfurta Suudaan, kaasi oo magaciisa loo bixiyey ka dib markii uu bixiyey dhaqaalihii Iskoolkaasi lagu dhisey.
Iskoolkan oo laga dhisay magaalada Cuey Machar ee Koonfurta Suudaan ayaa 21 jir Mario Bolatteli wuxuu dhaqaalaha ku bixiyey ka dib markii uu saaxiib la noqdey nin u dhashay dalka Suudaan oo isagoo yar inta ay qafaasheen falaagadii SPLA ay dagaalkii ay kaga soo horjeedeen xukuumadii Suudaan ay galiyeen, iyagoo u dhiibay qori xitaa aan u aqoon sida loo rido amaba aanu xakameyn karin.
Kon Kelei oo haatan 29 sano jir ah waxaa markii la qafaalay uu jirey afar sano oo kaliya waxaana la geeyey furimaha dagaalka isagoo lagu qasbay in uu dagaalamo, balse markii dambe ayuu ka baxsadey kooxdii SPLA wuxuuna qaxootinimo ku galey wadanka Holand halkaasi oo uu waxbarasho ka galey kana qaatey dhalashada dalkaasi.
Markii Koonfurta Suudaan ay ku dhawaaqdey xornimada oo ay ka go’aday dalka Suudaan intiisa kale, Kon wuxuu dib ugu laabtey Koonfurta Suudaan si uu uga qayb qaato dhismaha dalkiisa iyo waliba waxtarka bulshadiisa, waxaa laga sameeyey film documentary ah oo lagu magaacay “Silent Army” ama ciidanka aamusan, oo loola jeedo caruurta dagaalka loo adeegsato, hadaba filimkaasi oo laga baahiyey telefishinada caalamka ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii daawaday oo ay soo jiidatey qisadiisu ciyaaryahan Mario Balotteli, waxaana ugu dambeyntii uu xiriir la sameeyey Kon Kelei isagoo u sheegay in uu doonayo in uu caawiyo mashruuc uu ninkaasi wadey oo ahaa dhismaha Iskool waxbarasho kaasi oo uu bixiyey dhamaan dhaqaalihii ku baxay.
“Kon wuxuu ii sheegay in dagaalka ay ku qasbeen kooxda mucaaradka aheyd, iyagoo u dhiibay qori ka dheer oo aanu qaadi karin kaasi oo waliba ka cuslaa miisaankiisa” ayuu yiri Balotelli.
Balotelli wuxuu sheegay in Kon uu doonayo in uu dadkiisa caawiyo, sidaasina ay tahay mida ku go’aansadey in uu u caawiyo.
Mairo Balotelli ayaa caan ka noqdey saxaafada aduunka isagoo qaab ciyaareedkiisa ay ku noqotey boog wajiga kaga taal dhaqan iyo dabeecado aad liita oo had iyo goor lagas oo sheego taasi oo keentey in uu lagu maadeysto ficiladiisa qaabka daran, waxaana loo arkakayaa talaabadan caawinta ah ee uu hada ku dhaqaaqay mid uu ku doonayo in uu xaga wanaaga laga barto.
Arimaha la yaabka leh ee Balotelli sida weyn loola yaabay waxaa ka mid ah dabeecadiisa qalafsan xiliyada xitaa uu ku jiro garoonka, isagoo hadii uu kooxdiisa gool u dhaliyo waliba muhiim ah oo ay guul ku gaarayso aanu muujin farxad oo aad moodo in la dilay ama tacsi u taal halkii uu ka farxi lahaa, waxaa kale oo uu aad ugu mushquulaa timahiisa oo uu hadba si qaab daran uu u jarto iyo waliba haasawahiisa dhanka haweenka oo noqdey mid qosol iyo maad leh.
Waryaa...waryaa....waryaa....Balotelli oo qosol ku marsiinaya saaxiibtiis qaadashada buuga
Laba bil ka hor isagoo la dukaamaysanaya garar ay saaxiib yihiin ayuu inta isheeda iska eegay si hoose intii dukaanka lagu jirey ayuu soo qaatey buug ka mid ah buugaagta lagu daabaco sawirada dhaqamada xun iyo waliba telefoonada haweenka jirkooda ka ganacsada, arintaasi oo saxaadu si weyn u qaadaa dhigtey.
Link-ga hoose ka daawo Balotelli oo ka heshiin la’a funaanadiisa loona galinayo xili uu aad uga caroodey dharkiisa.DAAWO
salmaan yuusuf xirsi jookar says:
waxaa laa dhacaaya warka iyo barmamjyadaa kaa socada website
anigo waxaa kaa md ahaaya tagaarada sbc